Filazana fampihenana saram-pisoratana anarana amin’ny Vovonan’ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Filazana fampihenana saram-pisoratana anarana amin’ny Vovonan’ny Global Voices
Voadika ny 06 Jona 2008 2:29 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, বাংলা, Italiano, Español, English
Nezahinay sy izay miara-miasa aminay any Hongria izay azonay natao hampihenana ny saran-dasy mba ho takatry ny olona maro kokoa ny fahazoa-manatrika ny Global Voices Citizen Media Summit 2008 na ny fihaonana faratampon’ny fampahalalam-baovaon’olom-pirenena Global Voices.
Amin-kafaliana tokoa no ilazanay fa nahombiazana izahay nahavita nanintsana ny saram-panatrehana ny vovonana avy any amin’ny €210 (tokontokony ho US$323) ho US$152 mandritra ny roa andro (27 sy 28 jona), ka tafiditra amin’izany ny sakafo atoandro sy ny fialana hetaheta ho an’izay misoratra anarana mialohan’ny 25 jona. Ny saram-pandaniana rehetra moa dia azonao jerena ao amin’ny takelaka fisoratana anarana, izay tokony ho mandeha soa aman-tsara ao anatinn’y fotoana fohy.
Nihetsiketsika fatratra ny birao (virtoaly) ny Global Voices rehefa nanakaiky ny andro hanombohan’ny Vovonana. Araka ny efa fantatrareo moa, dia mielim-patrana maneran-tany ity vondrona (na fikambanantsika) ity na dia miara-miasa akaiky mandavanandro aza izahay sady mahomby rahateo izany, ka ny Vovonana ihany no fotoana tokana ahafaha-mifanatri-tava ho toy ny tarika iray.
Manakaiky ny 80 ny mpikambana avy amin’ny lafy valon’ny tany ao amin’ny fikambanana Global Voices no ho tonga any Budapest handray anjara amin’ny Vovonana, ary ao ihany koa ireo mpiofana ao amin’ny tetikasa Rising Voices (Fampanandratam-peo), sy ireo vahiny tonga manokana ho amin’ny sampan’asan’ny Global Voices Advocacy (Fisoloam-bavan’ny Global Voices). Efa maro ny firenena manana solontena ho amin’izany Vovonana izany ka anisany ny avy any Birmania (Myanmar), Kazakhstan, Sodan, Libanona, Bangladesh, Tonizia, Tirinite sy Tobago, USA, Brezila, Arzantina, Ezipta, Venezoela, Shina, India, Tajikstan, Bolivia, Goatemala, Hong Kong, Iran, Kenya, Singapore, Bahrain, Però, Malawi, Tanzania, UK, Philippines, Kolombia, Kanadà, Japana, Serbia, Frantsa, Repoblika Tsheka, Arabia Saodita, Syria, Taiwan ary Armenia.
Raha mbola tsy nitsidika ny takelaky ny Vovonana ianao sy nyprograma mampilendaleda arosony dia mampirisika anao izahay ankehitriny. Nametraka ny lisitry ny lohahevitra hodinihana mandritra ny Vovonana ao amin’ny bolongana natokana ho amin’izany ny mpandrindra ary manolotra anao ny anaran’ireo mpitari-draharaha isaky ny lohahevitra, koa manantena ny soso-kevitrao sy izay tiana ambara ao ihany koa izahay. Ho an’ireo izay tsy hiaraka aminay any Bodapesta, dia araho mandrakariva ny vaovao ahafahanao mandray anjara avy any amin’ny toerana misy anao.
Raha tontosa ity vovonan’ny fampahalalam-baovaon’olompirenena 2008 ity dia isaorana fa noho ny fanohanan’ny McCormick Tribune Foundation, ny John S. and James L. Knight Foundation, Open Society Institute, ny Berkman Center for Internet and Society, ny European Journalism Centre ary dotSUB.